AKFM : « Tokony hisy fifampidinihana mialoha ny fifidianana izay efa antomotra »
Efa antomotra ny fotoana hanatanterahana ny fifidianana. Herintaona mahery eo sisa dia higadona tanteraka izany. 27 octobre 2017
Nilaza ny filoha nasionalin’ny antoko AKFM, Rakotomanga Eric fa mialoha ny hanatanterahana an’io fifidianana io dia tokony hisy aloha ny fifampidinihana goavana eto amin’ny tany sy ny Firenena.
Anisany notsindriany manokana tamin’ izany ny tokony hisian’ny fifanatonana sy fihaonam-be eo amin’ny mpitondra ankehitriny, ny avy eo anivon’ny mpanohitra ary ny fiarahamonimpirenena. Anton’izany, hoy izy, ny mba hifanakalozan’ny rehetra hevitra mialoha ny hanatanterahana ny fifidianana amin’ny taona 2018.
Nohamafisiny fa mialoha ny hahatongavan’izay mpitondra vaovao hitantanana ny Firenena dia tokony hazava izay fandaharan’asany, ka ny rehetra no tokony hifampidinika ho amin’ny fanatanterahana izay fandaharan’ asany izay mba hahatanteraka ny fampandrosoana ny Firenena. “Raha ny fijerin’ny antoko AKFM azy dia tsara aloha raha misy fifampidinihana miaraka hataon’ny rehetra na mpanohitra na tsia.
Mba miara-mandalina ny hoe ahoana no fomba hitondrantsika ny Firenena. Milaza ny fandaharan’asany aloha ary samy milaza avy eo ho amin’ny kandidà ho harotsany. Aminay raha ohatra ka tsy maintsy hatao ihany io fifidianana amin’ny 2018 dia ny eo ihany no hiverina raha tsy hialohavana fifampidinihana satria efa tsy mifanaraka intsony ny mpitondra ny vahoaka”, hoy ny fanazavana noentin’ny filohan’ny AKFM, Rakotomanga Eric.
Notsiandrian’ity mpanao politika ity ihany koa fa raha tsy misy io fifanatonana io dia tsy hitondra na inona na inona eto amin’ny Firenena io fifidianana io fa lasa fiarovana ny tombontsoan’ ny vahiny fotsiny ihany. Nambarany fa amin’ izao dia mbola hita taratra ary mibaribary amin’ny zava-misy fa mbola ny vahiny no mibaiko ny mpitondra eo amin’ny fanatanterahana izay fifidianana izay.
Raha tsiahivina anisany antoko mijoro ho mpanohitra hatrany ny AKFM. Nitondra ny fanehoan-keviny ihany koa ny mpitarika manoloana ilay fiantsoana nataon’ny Filoham-pirenena ho amin’ny fifampidinihana hanitsiana ny lalàm-panorenana. Ho an’ity antoko ity, dia mazava ny hevitr’izy ireo izay milaza fa “tsy ilaina velively izany satria efa samy naneho ny heviny ny antoko politika sy ny fikambanana isan-tokony”.